Ngo-Agasti 2017 abathathi-nxaxheba beprojekthi ye-TV "Dom-2" bavinjelwe ukwenza ukuhlinzwa ngoplastiki phantsi kokusongelwa. Ukulungiswa kwanoma yikuphi ukulungiswa okucetywayo kwaqaliswa ngu-Xenia Borodina. Ngokombono wokubonisa isigxina esisigxina, ukunyanzeliswa ngokugqithisileyo kunye nokutshintshwa kwimeko yokubonakala kubonisa njengomzekelo ombi kubabukeli abancinci beTV. Inyaniso yokuba yi-Xenia owaqalisa ukukhawulelwa "ukulungiswa", kubonakala kungalindelekanga, yena ngokuqhelekileyo wayesebenzisa uncedo lwabagqirha beeplastiki.
Xenia Borodina wayebukeka njani phambi kweeplastiki
Ngaphambi kokuba yi-"telestroyrovaniya" ekhokela phambili, i-Xenia yayihlala ikhanya kwezinye iiprojekthi zendlela "TNT". Ngokomzekelo, ngo-2002 wayenomdla-mbambano wangaphambili kwiintetho ze-"Windows ", kwaye emva koko wabonakala kwinkqubo ethi" Intlungu yeNtombazana ".
Kuphela ngo-2004, inkwenkwezi yekamva yenyuka yenyuka intaba xa yayinikwe umsebenzi weprojekthi yesibili ehamba phambili "Dom-2". Ngokuchasene no-Xenia Sobchak Borodin obalahlekileyo, ngenxa yoko akuzange kuthathwe ngokungathandekiyo ixesha elide.
Kwiminyaka yokuqala yomsebenzi kwi-show ye-Xenia akazange ayibeke ingqalelo emfanekisweni wakhe. Uvavanyo lwalulinganiselwe kwiintlobo zeenwele ezintsha kunye nokwenza.
Abaphulaphuli baqaphela ukuba ngo-2006 uBorodin wabuyiselwa kakhulu. Ngokukhula kwama-164 cm, wayelinganise ngaphezu kweekhilomitha ezingama-60.
Imeko yatshintsha ngo-2009. Emva kokuzalwa, inkwenkwezi yaba yincinci kwaye yaqala ukubonakala ibhetele kunokuba ibambe iqhaza kwiprojekthi ye "Dom-2".
Kodwa ukulahlekelwa kwesisindo kwaba yindlela yokuqala yokuphucula ukubonakala.
Iifoto ze-Xenia Borodina emva kweeplastiki
I-Mammoplasty yodwa yonyango ye-plastiki eyenziwa yi-Xenia Borodina ukuya kwayo. Ukuhlinzwa, wagqiba emva kokuzalwa kwesibini ukubuyisela isimo sesifuba. Ndimele ndithi ukulungiswa kwavela ukuba kuphumelele kwaye kuhambelana kakuhle nomfanekiso omtsha woMdumo.
Ukutshatyalaliswa komzimba we-TV umenzi weentengiso kuye kwavelisa amahemuhemu malunga nokususwa kwamafutha amaninzi. Kodwa ekukhangeleni kuphela kwimifanekiso, akunakwenzeka ukuqonda ukuba ngaba kukho imposuction. Inokwenzeka ukuba, i-Xenia iphela kuphela kwiinkqubo ze-hardware.
Ngokuphathelele ukulungiswa kobuso, uBorinin ulwahlula naluphi na uplastiki. Zonke iinguqulelo, ubhala phantsi kokulahlekelwa yindleko ngokukhawuleza. Kodwa abalandeli bayaqiniseka ukuba inkwenkwezi ibuqili. Izindebe azikhulanga ngokungaxhaswanga ngoncedo lwe-hyaluronic fillers. Ukuthelekisa imifanekiso yokuqala kunye nemifanekiso yokugqibela, akunakwenzeka ukuba ungaboni umahluko.
Umbuzo we-rhinoplasty awuzange unyuswe ngokukhawuleza ude u-2017. Ngexesha elithile ababhalisile bakaBorina baqaphela ukuba impumlo yakhe yayincinci kwaye ibe yinto enhle, nangona isimo sayo sasingatshintshi kakhulu. Mhlawumbi le metamorphosis inxulumene kuphela nomsebenzi onobugcisa bomculi wokwenza iifoto kunye ne-photoshop, leyo inkwenkwezi isebenza ngayo.
Kungakhathaliseki ukuba yintoni eyenziwa ngokubonakala kwayo yayingaqhutyelwa ngu-Xenia Borodin, ngokucacileyo baya kumnceda. Kwanele ukukhangela inani lezithombe ukususela ngo-2004 ukuya ku-2018 ukuphawula utshintsho olulungileyo: umfanekiso wombukeli weTV usuhlanjululwe kwaye uhle kakhulu.
Ucinga ukuba ngubani osesithombeni? Uthandana namantombazana kwaye uhloniphe amadoda
Amadoda nobomi bomntu kaChulpan Khamatova
Ngaba kuyayisebenzisa ukusebenzisa ioli ye-linseed yeenwele?
Iidladi ezivela kwiklabusi ebusika Iminwe ihlamba - zokupheka ezilula kunye nezolisayo kwiitena ezingenayo inzalo. Iidladi ezivela kwiklabishi, ukhukhamba, utamatisi, izaqathe kunye anyanisi ngokweendlela zokupheka kunye nezithombe
Yiyiphi ingubo efanelekileyo: i-gel okanye i-acrylic
Ioli efunekayo yesikhumba
Izindlela zemvelo zonyango lwe-milly syndrome (inxalenye yesi-2)